Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FCIID si Nigeria & ụwa | TAA
SERAP sues Senators, chọrọ nkwụghachi nke N13.5m iwu na-akwadoghị
ICG: ụka Katọlik kwesịrị itinye aka na nsogbu Cameroon
Onye isi oche PDP nke Uche Secondus na-agbazi isi bu Buhari n'ihi na ebubo ya na-eme ka mba Benue ...
Ụgbọ mmiri Navy na ụgbọ mmiri Navy na ụgbọ mmiri na-aga na 406
NCC na-akwụzi N49.7 ijeri gọọmentị etiti
FAAN na-akwali igbochi omume rụrụ arụ na ọdụ ụgbọelu
Official: Ndị na-ezigara ego na-efu N20 ijeri kwa ọnwa
Home Tags FCIID
Ndị uweojii na-ekwu na ebubo a ga-egbu igbu ụda
Isi ụlọ ọrụ 5 mpaghara nke Nigeria Police Police, Benin City, emeela atụmatụ ọ bụla iji kpochapụ otu onye Ovie Osiebe-Franklin, onye ebubo na-agba ụda, na onye ọzọ Anodeh Brave.
Ndị uweojii jidere onye nduzi ahụike maka ịkatọ ọrụ, nrụrụ aka
Onye uweojii Medical, Federal Neuro-Psychiatric Hospital, Enugu, Dr. Jojo Onwukwe, bụ ndị uweojii jidere na ụnyaahụ site na Force Headquarters n'ihi na a na-ekwu na ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ahụ na-emetọ ha, na-emejọ ụlọ ọrụ na nrụrụ aka.
Ndị uweojii na-abaghị uru na Abuja
Ulo oru ndi agha nke Ngalaba Na-eme Nchukwu Oria, FCIID, nke ndi uweojii na Naijiria ejidewo onye 36 afo nwoke, John Torsoo, na-ekwu onwe ya dika onye nlekota oru n'ime ndi oru uweojii.
Ibrahim Umar bu onye isi CID isi
Ngalaba Na-ahụ Maka Mmebi Iwu na Ngalaba Nyocha (FCIID), Alagbon-Close, Ikoyi, Lagos ga-edozi ya ọzọ site n'aka ndị uwe ojii ọhụrụ.
Ndị uweojii na-etinye Helicopters, MOPOL, Ụgbọ njem pụrụ iche na Benue, Osimiri
Onye isi nyocha nke ndị uweojii, Ibrahim Idris, ejirila akụkụ ndị ọzọ nke ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii, ndị helikopta na ndị isi ojii nwere ọgụgụ isi pụrụ ịga n'ógbè ndị isi obodo dị na Benue na osimiri.
Ahmed Bello họpụtara onye nlekọta ndị uweojii Nasarawa ọhụrụ
Onye isi nyocha nke ndị uweojii (IGP), Ibrahim Idris Kpotum, kwadoro ọkwa nke Mr. Ahmed Bello dịka Kọmitii Ndị uwe ojii na Nasarawa State.
Ndị uweojii na-etinye ndị ọrụ 26,000 ọzọ maka ntuli aka Anambra
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Nigeria kwuru na ọ ga-etinyekwu 26, ndị ọrụ 000 maka nchịkọta gọọmentị ochichi Anambra maka ọnwa Nov.NNUMX.
Anambra guber: IGP Ibrahim Idris deploys DIG, AIG, 3 commissioners maka nche
Tupu onye isi ochichi gọọmenti nke Saturday na Anambra State, Onye Nlekọta Nlekọta Ndị uweojii, Ibrahim Idris, depụtara onye isi nyocha nke ndị uweojii na-elekọta ọrụ iji dozie nchedo tupu ma n'oge mmega ahụ.
Ihe gbasara ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu na-eme ihe ndi ozo na-eme ka ndi mmadu kwadoro "N108 nke iwu na akwadoghi n 'onu ogugu obula nke onye obula nyere ya, ma kwusi ndị ome iwu na-anata ụdị ego ndị ahụ na-ezighị ezi. "
Nnukwu Nwanna Naija "Na-agba Mgbochi" 2018 mbụ na-agba ọsọ, Cynthia Nwadiora aka CeeC, ekpughewo na ọ ga-aga ọgwụ na njedebe iwe.
Ahịa 378.19 nde ego na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ N6.26 na Naijiria Exchange Exchange
Ndị na-achụ ego na-ere ahịa 378.19 nde, jiri ọnụahịa N6.26 na 4,780 mee ihe na Njazi Ngwaahịa Naijiria (NSE) na Thursday.
Chọọchị Roman Katọlik kwesịrị ịkwado nsogbu na mpaghara Bekee na-asụ Bekee, bụ ebe ndị nnọchiteanya na ndị nche na-agbanye n'ọgba aghara, a na-agbarịta ụka na Thursday.
Onye uweojii PDP nke Uche Secondus na-agba Beera Buhari isi n'ihi na ebubo na ya bu Benue maka Bauchi
Onye isi oche nke National Peoples Democratic Party, Uche Secondus, akọwawo na "enweghị isi" President Muhammadu Buhari "enweghị ike" iji gaa obodo Benue.
Carlo Ancelotti ekweghị na-eme ihe nkwụsị nke Arsenal
Carlo Ancelotti ekweghị na-achịkwa na ọ ga-enwe ike dochie anya Arsene Wenger dị ka onye nchịkwa ọzọ Arsenal.
Onye nyocha: 'Ogbono' ofe nwere ike imeziwanye ọgwụ nke ọgwụ ndị na-egbochi ọrịa Malaria
Otu onye na-ere ọgwụ, Dr. Chukwuma Agubata ekwuola na ịṅụ Irvingia Fat sitere na mkpụrụ nke Irvingia Gabonensis Var Excelsa, nke a maara dị ka 'Ogbono' na-enyere aka meziwanye uru nke ọgwụ ọjọọ.
Minista: Naijiria abughi ihe iyi egwu zuru oke uwa ebe o bu ikpe ikpe ahu na Lassa
Minista Health, Prof. Isaac Adewole, kwuru na Naijiria anaghị atụ mba ọ bụla egwu na-adabere na ya n'ihi ọrịa ndị Lassa na-ede na ụfọdụ mba.
Jim Comey: Vladimir Putin boro isi na Donald Pump banyere "ndị mara mma nke Russia"
Donald ụda kwuru na Vladimir Putin agwala ya na Russia nwere "ụfọdụ n'ime ndị mara mma na ụwa", dịka memos dere site n'aka onye isi FBI.
Facebook na-ekpuchi usoro mkpesa maka mgbe ọ na-ewepụ posts
Facebook kwuru na Tuesday ọ ga-enye ndị ọrụ ohere ikpebi ikpe ma ọ bụrụ na netwọk mmekọrịta na-ekpebi wepu foto, vidiyo ma ọ bụ akwụkwọ edere edere dị ka iwubi iwu ndị obodo.